Iyo indices yeSpanish stock market: kuisa mari iyo | Ehupfumi Zvemari
Mari yeSpanish haina kuganhurirwa kune chete Ibex 35, sevamwe vatengesi vadiki nepakati vanogona kufunga panguva ino. Kune mamwe madiki madiki anozivikanwa ayo anogona kunge ari iwo maitiro ekushanda kwedu kubva zvino zvichienda mberi. Mamwe acho akakosha kwazvo, kunyangwe mamwe ari makuru asingazivikanwe kune yakanaka chikamu chesavers. Tiri kuzokuratidza dzese dzacho kuti iwe ugone kukwanisa kuwedzera marongero ako mubazi rekudyara, usinga ganhuriridze kune yakasarudzika indekisi yemari yenyika.
Mune ese mavo unogona kuwana chaiwo mabhizimusi mikana sezvo iwo musiyano mukuru wekuti aya manyuko emusika wekutengesa mareferenzi aripo ndiyo kutengesa huwandu yakapihwa nekuchengetedzwa kwakanyorwa imomo. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Chero zvazvingaitika, vanozoshanda kuti vasvike pamhedziso yakajeka uye ndiko kuti kune hupenyu huripo kupfuura iyo Ibex 35 sezvauchaona munguva pfupi.
Izvi hazvireve kuti sosi huru yekutsvaga kweSpanish stock market iIbex 35. Sezviri mukondinendi yekare ne CAC 40, DAX kana FTSE 50. Iko mamwe emakambani akanyanya kunyorwa pasi akasanganiswa. Uye mune chero mamiriro ezvinhu ivo vanogadzirawo inosarudzika indekisi yeEuropean equities, iyo inonzi Eurostoxx 50. Nekuvapo kwevamwe veakanakisa masheya pamusika wesitoko wenyika, seSantander, BBVA kana Iberdrola kungodoma chete mienzaniso mishoma. .
1 Ibex 35: kirabhu yakasarudzwa pamusika wemasheya
2 ChiSpanish inoenderera musika
3 Ibex makapisi madiki
4 Ibex yepakati ngowani
5 Imwe nzira Stock Market
6 Latibex, iyo yeSpanish stock stock
Ibex 35: kirabhu yakasarudzwa pamusika wemasheya
Ibex 35 ndipo panobatanidzwa makambani makumi matatu nemashanu akanakisa pamisika yemari. Nekuvapo kwe angangoita ese mabhizinesi zvikamu: mabhangi, makambani ekuvaka, makambani emagetsi, kutaurirana, ndege, nezvimwe. Iwo ari mune ese makesi makambani emari makuru uye ichi chinhu chinovasiyanisa kubva kune mamwe machengetedzo akanyorwa pane echipiri kana mashoma maindekisi. Anenge ese mashandiro anoitwa nevashambadzi vadiki nepakati anoendeswa kuburikidza neiyi yakakosha nyika musika wemari.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyo Ibex 35 ndeimwe yemasheya indices ayo anopa a yakakura kudhara mukushanda. Ndokunge, hakuzove nechero mhando yematambudziko ekugadzirisa iyo kutenga nekutengesa mitengo uye semhedzisiro yadzo hauzombobatirwa mumutengo. Izvi zvinobatsira vashandisi kupinda mumusika wezvemari. Nekuvapo kwemakambani akakosha kwazvo epasirese uye ayo akatonyorwa pane mamwe misika yepasi rose equity Uine huwandu hwakakosha hwekushanda mazuva ese uye izvo zvinobvumidza ako mashandiro kuve akaomeswa nekukurumidza.
ChiSpanish inoenderera musika
Iyo yemagetsi stock exchange system inobatanidza vanoshanda mune zvemari venzvimbo ina dzeSpanish stock -Madrid, Barcelona, ​​Bilbao neValencia- nenzira inobvumidza kuitiswa kwekutenga nekutengesa mashandiro emasheya chero akanyorwa kukosha kubva kune chero chinongedzo. zvakabatana nemisika iyi.nyika bhegi. Kune zvinopfuura zana tsika dzakabatanidzwa, kunyanya panguva ino Makambani zana nemakumi maviri nenomwe kubva kumatunhu akasiyana akanyorwa. Makambani ese ari maviri anoumba yakasarudzika equity index uye nekuchengetedzeka kuri kunze kweichi sosi yemusika wekutengesa mareferensi.
Chero zvazvingaitika, ndeimwe yemipimo iyo vese vashoma uye vepakati-varereti maiseti vanozvimisikidza pachavo kuti vagadzire avo ekudyara mapotifoti. Kubva kumakambani senge kambani yekuvaka ACS kune vamwe vasina hushoma senge Sniace kunyanya. Saka kuti unzwisise zvirinani, iyo inoenderera yeSpanish musika ndiyo yakavhenganiswa bhegi yemari ChiSpanish. Iko kwaunogona kuwana chero mhando yemakambani, yakakwira, yepakati uye yakaderera capitalization. Pasina iwo iwo akanyorwa seyikamu yemusika wekutengesa. Nekuti zvazviri, haina kutarisirwa sekanzuru pachayo, asi zvinopesana, inoumbwa mune yemagetsi stock stock system.
Ibex makapisi madiki
Ichi chidiki, asi chisina kukosha kukosha indekisi yemidziyo midiki-chivharo. Mune mamwe mazwi, makambani madiki aripo mumisika yemari. Iko kusagadzikana ndechimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha madhinomine uye pamusoro pezvimwe kufunga. Mune zvimwe zviitiko kunyangwe pasi pekufungidzirwa kwe fungidziro tsika uye kuti vanofambisa mashoma mashoma mazita mune yega yega yekutengesa chikamu. Kuva nengozi kwazvo nekuda kwehunhu hwayo sezvo iwe uchigona kusiya maeuro mazhinji munzira.
Kune rimwe divi, iyi indekisi yemari yenyika inoumbwa seimwe nzira yekuti kana usina nzira dzekupinza indekisi huru, iyo Ibex 35. Nenhevedzano yemaitiro ayo asingazonzwike kunge akajairika kwauri kana zvirinani iwe hauzive nezvake. kuvapo kwake. Ichi chinhu chinowedzera kuita mashandiro nekuti unenge usina mareferensi ekuongorora kana zviri nyore kugadzirisa mafambiro aya mumisika yemari. Chii chimwe, havawanzobhadhara zvikwereti pakati pevashandi vayo.
Ibex yepakati ngowani
Iyo indekisi yepakati kwaunogona kushanda mukushayikwa kwesarudzo paIbex 35. Aya ndiwo makambani akakosha chaizvo akanyorwa akange ari kana achazobatanidzwa mune indekisi inosarudzika yemari dzeSpain kanopfuura kamwe chete. Uye izvo zvakasiyana nemaIbex madiki makapu, dzimwe dzenhengo dzadzo dzinogovera zvikamu kune vanoita mari vakatora zvinzvimbo mumasecurity avo. Mumwe wemienzaniso unomiririrwa na Atresmedia uye kuti ikambani yekutaurirana yakava chikamu cheIbex 35 nguva pfupi yadarika.
Nepo pane izvo zvinopesana, iyo Ibex diki makepisi inosanganisa makambani ane huwandu hunogutsa hwezvibvumirano. Pasina kuve nematambudziko ekupinda kana kubuda mumisika yezvemari futi. Ichokwadi kuti inonyanya kufanana neIbex 35 kubva pane ese maonero, kusanganisira hunhu hwemakambani ayo. Kuumbwa kwaro kuri nyore kupfuura mune mamwe mareti emusika wemasheya uye iwe unogona kuwana makambani erudzi chero rupi zvaro anogona kuenda kune rakakosha boka chero nguva Icho chimwe cheanongedzo masosi ekuti vashoma nevapakati varimi vanofanirwa kugadzirisa mashandiro avo.
Imwe nzira Stock Market
Iyo inozivikanwa seMAB ndiyo ingangodaro isingazivikanwe nevashandisi uye panguva imwechete ine njodzi kuita mabasa pamusika wemasheya. Izvi zvinodaro nekuti ivo vanoumbwa nekuchengetedzwa kuchangobva kugadzirwa kana, zvakatoipisisa, zvakanyanya kufungidzira. Nezvakakosha mutsauko pakati pemitengo yavo yepamusoro uye yepasi uye kuti ivo vanonangidzirwa chete kune yakanyatso tsanangurwa yakajeka investor chimiro: vane ruzivo mune irworwu rwekushanda uye ndiani asingatyi njodzi mune irwu rudzi rwekushanda mumisika yemari. Iko kune kukwirisa kwakanyanya muhunhu hwavo, asi kudonha kwavo kunoshamisawo.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti iyo Imwe nzira Stock Market musika wakarongeka unobvumidzwa neHurumende yeSpain uye inotarisirwa neNational Securities Market Commission (CNMV). Kubva pamaonero aya, inopa chengetedzo kune zviito zvevashambadzi vadiki nepakati kunyangwe vachitenda kuti vamwe veava vamiririri vangangogara mune yekudyara. Chero zvazvingaitika pane chinhu chimwe chete chechokwadi uye mazhinji emakambani ausingazonzwa muhupenyu hwako hwese. Hazvishamisi kuti vamwe vanga vachitengesa pamusika wezvemari uyu kwenguva pfupi.
Latibex, iyo yeSpanish stock stock
Tiri kutarisana neimwe yemaketi akaenzana ekuenzana ezvese nekuda kwehunhu hwayo. ILatibex musika wemasheya ezvivigiro zveLatin America zvinogara muMadrid uye zvinoshanda kubva Zvita 1999. Inotungamirwa neSecurityities Market Law uye iri chikamu cheBME. Mariri unogona kuwana kukosha kwenzvimbo iyi. Kubva Argentine, Brazilian, Chile makambani uyezve zvakare Spanish. Iyi ndiyo imwe nzira yakatarwa yekudyara mari muSpanish equities.
Iyo ine mukana wekuti iwe unogona kurongedza kutenga kweBrazilian securities ayo parizvino ari akanaka tekinoroji mamiriro. Seimwe yeanonyanya kuratidza hupfumi huri kusimukira kuisa mari kubva ikozvino. Nemakomisheni ari pamatanho akafanana zvakanyanya nemisika yenyika yequity. Pane rimwe divi, haina kupa zvakasiyana mukuvhurwa kwemusika wayo sezvo maawa ekutengesa emusika uyu ari kubva 11:30 kusvika 17:30, munguva yeSpanish. Uyu musika unozivikanwawo nenyaya yekuti ine sevamiririri vese nhengo dzeSpanish stock stock.
Sezvaungave iwe wakaona, hazvichadiwe kuenda kuIbex 35 kuti uite mabasa ako mumisika yenyika. Asi pane zvinopesana, iwe une zvimwe sarudzo kupfuura zvawaifunga kubva pakutanga. Kunyangwe kusanganisa mari yemari yenyika pamwe neLatin America. Chero zvazvingaitika, nekushanduka kwakafanana pakati pezvikamu zvese zvemasheya zvataunza mune iyi ruzivo. Pasina kusiya minda yedu kuti mari ichengetwe kuburikidza nemaitiro ako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Iwo maindekisi eSpanish stock stock: kuisa mari yacho